विश्वकप क्रिकेट : पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाको भिडन्त आज, कस्को पडला भारी ? – Nepal Trending
विश्वकप क्रिकेट : पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाको भिडन्त आज, कस्को पडला भारी ?
On २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ११:११
काठमाडौं । इङल्यान्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटमा आज विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया एक–अर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यस खेल टाउटोनको काउन्टी क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा ३ बजेदेखि सुरु हुनेछ । यो मैदान त्यही हो जहाँ पाकिस्तानी तीव्र बलर मोहमद अमिरले स्पट फिक्सिङको आरोपमा पाँच वर्ष सजाय भोगेर उत्कृष्ट पुनरागमन गरेका थिए ।
इंग्ल्यान्डमाथि सनशनीपूर्ण जित निकालेको पाकिस्तान अष्ट्रेलियामाथि पनि त्यस्तै जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ । पहिलो खेलमा अफगानिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गरेको अष्ट्रेलियाले दोस्रो खेलमा वेष्ट इन्डिजलाई १५ रनले पराजित गरेको थियो । तर आफ्नो तेस्रो खेलमा भने भारतसँग पराजित भएको थियो । विश्वकपमा यि दुइ टोली नौपटक आमनेसामने भएका छन् । जसमा अस्ट्रेलिया पाँचपटक विजयी हुँदा पाकिस्तानले चार खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको छ ।
अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान पहिलो संस्करणदेखि नै विश्वकपमा सहभागी हुँदै आएका टोली हुन्। यद्यपि, अस्ट्रेलियाले सन् १९८७, सन् १९९९, सन् २००३, सन् २००७ र सन् २०१५ मा गरी पाँच पटक उपाधि चुमिसकेको छ। अर्कोतिर पाकिस्तानले सन् १९९२ मा एकपटक मात्र विश्वकपको उपाधि उचाल्ने अवसर पाएको छ। यो तथ्यांकले भने विश्वकपमा पाकिस्तानको तुलनामा अस्ट्रेलियालाई निकै बलियो देखाउँछ।
अस्ट्रेलियाको ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ सबै पक्ष उत्कृष्ट छ। पाकिस्तानी टोलीको सबैभन्दा ठूलो यतियार तीव्रगतिका बलर हुन्। यसरी पछिल्लो समय एकदिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान फरक चरित्र बोकेका टोलीको रूपमा स्थापित छन्।
पाकिस्तान : सर्फराज अहमेद (कप्तान) अबिद अलि, बाबर आजम, फहीम अर्शाफ, फखर जमान, हरिस सोहिल, हसन अली,इमाद वासिम, इमाम उल, जुनिद खान, मोहमद हाफिज, मोहमद हसन, शादब खान, शाहिन साह अफ्रिदी, शोयब मल्लिक
अस्ट्रेलिया : आरोन फिन्च (कप्तान) डेभिड वार्नर, उस्माना खवाजा, स्टेभन स्मिथ, साउन मार्स, अलेक्स कारेय, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन म्याक्सवेल, मिचेल स्टार्क, जेन सिचार्डसन, पाट कुमिन्स, जसन बेरेन्डोर्फ, नाथन कल्टर–नीले, आडम जम्पा, नाथल लियोन